HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirESTRAM waxay u shaqaaleysiin doontaa 18 shaqaale ahaan darawal bas
08 / 02 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, BULSHADA BULSHADA, Xaraashyada, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
estram 18 ayaa shaqaaleysiin doonta shaqaalaha
ESTRAM (Degmada Eskişehir) Darawalka baska 18 waxaa loo shaqaaleeyaa shaqooyinka gaadiidka dadwaynaha waxaana codsiyada laga rabaa ilaa laga gaaro 9 Febraayo 2019 Date.
Shirkadda gaadiidka dadweynaha ee ESTRAM (Eskisehir) ganacsatada gaadiidka dadweynaha, shaqaalaha 18 waxaa loo qorayaa darawal bas. Codsadayaasha haysta ugu yaraan liisanka darawalnimada sannadlaha ah ee 1 waxay awoodi doonaan inay codsadaan. Shaqaalaha lagu qorayo shaqaalaynta dadweynaha waa inay ka shaqeeyaan xudduudaha gobolka Eskisehir.
Shaqaalaynta shaqaalaha ESTRAM si joogto ah ayaa loo qabtaa, darawalkuna wuxuu noqon doonaa isbeddel shaqo oo u dhexeeya 05: 30 / 13: 00 iyo 13: 00 / 21: 00. Codsiyada qorista shaqaalaha oo dhammaan muwaadiniinta Turkiga ay codsan karaan waxay bilaabeen 7 Febraayo 2019 Date iyo codsiyada waxay ku dhammaan doonaan 9 Febraayo 2019 Date.
Shuruudaha loogu talagalay musharixiinta loogu talagalay qorista; Waa lagama maarmaan inaad haysato liisan darawalnimo fasalka E ama baska, si aad u hesho shahaadada SRC 1 / 3 iyo inaad haysato shahaadada cilminafsiga. Kaliya musharixiinta labka ah ayaa codsan kara qorista.
Dadka codsanaya qorista waxaa looga baahan yahay inay si shakhsi ahaan ah u codsadaan gaadiidka tareenka fudud ee ESTRAM ee 9 Febraayo 2019 Taariikhda, taas oo ah waqtiga kama dambaysta ah ee codsiga, oo codsanaya 10: 00 iyo 14: 00.Qorista Shaqaalaha Dadweynaha
ESTRAM 18 qoraalka qorista qorista Riix halkan.
ESTRAM 18 Qorshaynta Shaqaalaha
U soo guurista garoonka Istanbul mar labaad